siddhicharan shrestha-yug ko urdi-poem ~ Khabardari.com
siddhicharan shrestha-yug ko urdi-poem
9:52 PM Admin No comments
यूग को उर्दी - कवीता - युग कवी सिद्धिचरण श्रेष्ठ
संकट पर्दछ मान्छेलाई, ढुङ्गालाई के पर्छ !
असिना आई फुलबारीकै फूलहरू पहिले झार्छ ।
जसको छाती जति विशाल त्यति नै सङ्कट उसलाई
गोली लाग्दछ बापूमा नै केही हुँदैन अरूलाई ।
वडवानलले रोज्दछ सागर खोँच र खोला रोज्दैन,
संकटले पनि भुसुनाहरूमा क्वै मीठो रस पाउन्न ।
तरुणीजनले बालकहरूमा के रस पाउँदछन् साथी,
संकटदेखि थिचिनेहरूमा संकटको मिल्छ र छाती?
संकट भोगी मर्नेहरूकै नाममहा संकट खुल्छ
प्रेमी जनको याद बुनेरै प्रेमिकाको जीवन चल्छ ।
मानिस तैँले उठनै पर्छ, दु:ख संकट भोग्नै पर्छ
युगको उर्दी माने पो ता मानिस यो मानिस बन्छ ।
Posted in: Poem,साहित्य,सिद्धिचरण